तपाईंको आजको राशिफल/वि.सं. २०७५ साल असोज ११ गते, बिहीबार। | Ekhabar Nepal
धार्मिक असोज ११ २०७५ ekhabarnepal
वि.सं. २०७५ साल असोज ११ गते। बिहीबार। इश्वी सन् २०१८ सेप्टेम्बर २७ तारिख। नेपाल संवत् ११३८ ञलगा। आश्विन कृष्णपक्ष। तिथि– द्वितीया,
रमाइलो जमघटमा सहभागी बन्ने अवसर जुट्न सक्छ।प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। बौद्धिक उपलब्धिले आत्मविश्वास बढ्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ। मन पर्ने वस्त्र, अलंकार आदि उपहार पाइने योग छ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। शुभचिन्तकहरूको सहयोगले नाम र दाम प्राप्त हुनेछ। कर्मफलले मन प्रसन्न रहनेछ।
विवादमा परिए पनि कमजोरी सच्याउने समय छ।होसियार बन्न नसक्दा फजुल खर्च भए पनि श्रमअनुसार फाइदै हुनेछ। कामबाट उपलब्धि उठाउन सकिनेछ। तर, परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला। सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदै हुनेछ। समस्या दर्साउँदा सुखदुःखमा साथ दिनेहरू फेला पर्नेछन्। लगनशीलताले परिस्थितिलाई बदल्न सक्छ।
मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्, सजग रहनुहोला। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। लाभको अवसर मिले पनि तत्काल फाइदा लिँदा भविष्यमा नोक्सान हुने देखिन्छ। सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै लाभ हुनेछ। प्रयत्न गर्दा पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइनेछ।
अधिकारीवर्गको सहयोगले प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। पारिवारिक मतभेद र अवरोधका बीच पनि सामाजिक नेतृत्व हातलागी हुनेछ। भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम लिन सकिने छ। कीर्तिमानी काम गर्दै दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ।
आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व हातलागी हुनेछ।समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। धेरैले तपाईंका कामको तारिफ गर्नेछन्। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् भने आँटेका काम बन्नेछन्।
सुखदुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्।विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ। आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ। जिम्मेवारीबाट मुक्त रही विश्राम पाइनेछ। परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै पारिवारिक सुख प्राप्त हुनेछ। अतिथिका रूपमा सम्मान पाइनेछ। रमाइलो यात्रा गर्ने मौका छ।
भौतिक साधन जुट्नेछन् र दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुन सक्छ।प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। हठ गर्ने बानीले दुःख पाइएला। सद्विचार लिनेहरूका लागि समय उत्साहजनक रहनेछ।
पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ भने बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। दिन उत्साहपूर्ण रहला। सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदा हुनेछ। व्यापारमा सामान्य र पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन्।
अाफन्तको सहयाेगले राम्राे फाइदा हुनेछ।परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्न नसक्ता अलि दुःख पाइनेछ। मान्यजनसँग असमझदारी बढ्न सक्छ। चिताएको काममा दाेहाेर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। साझेदारीमा देखिएकाे समस्या सुल्झाउन सकिनेछ। बेसुरमा दिएको वचनले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। प्रयत्न गर्दा आमाको माध्यमबाट काम बनाउन सकिनेछ।
केही अवसर बाहिरिए पनि प्रतिस्पर्धीहरू पछि हट्नेछन्।अनुकूल समय छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। कृषि–चौपायामा केही समस्या देखिए पनि प्रशस्त धन आर्जन हुनेछ। शुभचिन्तकहरूले कमजोरीप्रति गुनासो गर्न सक्छन्, सजग रहनुपर्नेछ।
रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता बढ्नेछ। दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने काम सुरु हुन सक्छ। तार्किक क्षमता एवं बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। ठीक समयको सही निर्णयले विभिन्न अवसर दिलाउनेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। मान–सम्मान पाइनेछ। बोलीको भरमा चिताएको काम बन्नेछ।